Dalalka Xubnaha Ka Ah AMISOM Oo Cambareyey Muddo Kororsiga » Axadle Wararka Maanta
Dalalka xubnaha ka ah AMISOM oo Cambareyey Muddo Kororsiga
Addis Ababa (Axadle) – Shirkii 32-aad ee T-PCC-yada, oo qabsoomay 28-kii bishan, ayaa laga soo saaray go’aamo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya ee xilligan iyo qalalaasaha ka taagan ballaarinta hay’adaha dowladda federaalka.
Kulankan oo uu shir gudoominayey Madaxa Siyaasada, Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika, Bankole Adeoye, ayaa waxaa ka soo qeyb galay wakiilo ka socda dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo Uganda.
War-murtiyeed ka soo baxay kulanka ayaa mar kale lagu sheegay cambaareynta Midowga Afrika ee go’aanka hal dhinac ah, ee ay meel mariyeen Baarlamaanka Soomaaliya iyo Madaxweyne Farmaajo 12 iyo 13-kii Abriil, oo loogu kordhiyay laba sano.
Kulankan ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in heshiiskii Sebtember 17 uu yahay wadada looga wada xaajoodo geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya.
“T / PCC-yada waxay isku raaceen inay qaadaan tallaabo lagu tirtirayo xoogagga ka soo horjeeda rabshadaha Muqdisho iyo meelo ka baxsan, iyadoo sidoo kale la ilaalinayo lana ilaalinayo aagagga Afrika,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Kulanku wuxuu muujiyey in xaaladda hadda ka taagan Soomaaliya ay tahay mid laga walwalo oo ka sii daraysa, waxaana lagu celceliyey baaqeeda ku aaddan in la qaado tallaabooyin lagu xoojinayo kalsoonida iyo wada-xaajoodyo furan oo heshiis lagu gaaro.
Waxay soo dhoweeyeen hadalkii Farmaajo ee ahaa inuu baabi’inayo qaraarkii aqalka hoose 12-kii Abriil iyo inuu kordhiyo heshiiskii Sebtember 17.
Ka qeyb galayaasha kulanka ayaa ugu danbeyntii ugu baaqay AMISOM in ay ka waantowdo faragalinta ay ku heyso siyaasada Soomaaliya isla markaana ay dhex dhexaad ka ahaato saaxada siyaasada si looga dhigo Caasimadda Muqdisho goob ka caaggan milatariga.